आफ्नै गाउँमा विजुली बाल्न नसक्ने गुरुङलाई कोइरालाको चुनौती
लमजुङ, ६ मंसीर । पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, एमालेका प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । ०६२÷०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपाल सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री बन्नुभयोे । नेकपा एमालेको सचिव पनि हुनुहुन्छ उहाँ । केन्द्रीय राजनीतिमा उहाँले धेरै पहुँच राख्नु हुन्छ ।
एमालेका शक्तिशाली अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका नजिकका नेता भएकाले पनि सरकार र पार्टीमा उहाँको पहुँच राम्रो पुग्छ । उहाँले चाहे लमजुङको लागि मात्र होइन, देशका कुनै पनि ठाउँमा चाहेको काम गराउन सक्नुहुन्छ ।तर गुरुङले खासै विकासको नाममा केही काम गरेको देखिएको छैन, न त उहाँले लमजुङमा नै विकासको नाममा केही गर्नुभयो । लमजुङका अधिकांश गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारणको विजुली बत्ती पुगिसकेको छ ।
तर आजसम्म पनि उहाँकै गाउँ गिलुङमा राष्ट्रिय प्रसारणको विजुली बलेको छैन । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जस्ता नेताको गाउँमा विजुली बत्ती किन पुगेन ? लमजुङका कांग्रेस नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री रामबहादुर गुरुङ भन्नुहुन्छ–“यो उहाँकै कारण भएको हो,े जिल्लाका धेरै ठाउँमा कांग्रेसको पहलमा विजली पु¥यायौं, गिलुङ त उहाँको गाउँ, अनि नजिकैको चरागाउँ उहाँको ससुराली पर्छ ।
यी दुई गाउँमा विजुली पु¥याउने जिम्मा उहाँलाई छोडिदिएका हौं । उहाँले चाहे पु¥याउन सक्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले चाहनु भएन ।” उनै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बाम गठबन्धनको तर्फबाट लमजुङको क्षेत्र नं. २ (ख)बाट प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्वाचनमा उठ्नु भएको छ । गुरुङलाई देशको विकासका चिन्तक, लमजुङको विकासको एकमात्र नेता भनि प्रचार गरिएको छ ।
प्रदेश नं. ४ को भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा समेत चित्रण गरीएको छ । लमजुङका जनताले उहाँलाई ०६४ सालको संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा जिताएर पठाएका थिए । तर संविधानसभामा संविधान बनाउन भन्दा आदिवासी जनजाति र विशेष गरी गुरुङहरुको मात्र वकालत गरेको आरोप उहाँमाथि लाग्ने गरेको छ । संविधानसभामा ‘ककस’ गठन गरी जनजातिका मुद्दामा मात्र केन्द्रीत भई संविधान निर्माणमा असहयोग गरेको आरोप उहाँमाथि छ ।
तत्कालीन आदिवासी नेता आङछिरिङ शेर्पा जस्तै बाहुन क्षेत्री समुदायप्रति असहिष्णु बनेको आरोप लागेपछि सोही कारण ०७० को निर्वाचनमा उहाँ पराजित भएको विश्लेषण छ । स्वयं गुरुङले पनि एक अन्तरवार्तामा “बाहुन क्षेत्रीले काशी जानु पर्ने डरले हराए” भन्ने अभिब्यक्ति दिनु भएको थियो । अहिलेको प्रदेश सभा निर्वाचनमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको टक्कर नेपाली कांग्रेस लमजुङक निवर्तमान सभापति कृष्ण कोइरालासंग छ ।
लमजुङको विकास निर्माण र यससंग सम्बन्धित हरेक क्रियाकलापमा कोइराला पार्टीको क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सचिव हुँदै सभापति हुँदासम्म सहभागी हुनु भयो । हरेक गाउँमा पुगेर विकासका काममा प्रत्यक्ष लागि परेकै कारण कोइराला जनताबीच लोकप्रिय हुनुहुन्छ । नरम मिजासका कोइराला गुरुङका लागि ठूलो चुनौति बन्नु भएको छ । जिल्लामा राम्रो छवि बनाएका कोइरालासंग चुनाव लड्न गुरुङलाई सहज छैन ।
बाम गठबन्धन भए पनि यो क्षेत्रमा माओवादीको राम्रो प्रभाव छैन । कांग्रेस उमेदवार कोइरालालाई दुई राप्रपाले साथ दिँदै गर्दा गुरुङको भन्दा कोइरालाको पल्ला भारी देखिन्छ । हुन त एमालेले कोइरालालाई स्थानीय चुनाबमा बगिलाई सघाएको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताको मत तान्न खोजेको छ तर कांग्रेस कार्यकर्ताहरु अहिलेको निर्बाचनमा कम्मर कसेर लागेका छन् र बाम गठबन्धनलाई हराउन तल्लिन देखिन्छन । कांग्रेस लम्जुंगका नेता शंकेरकांत जोशी भन्नु हुन्छ -“कांग्रेस अहिले एकजुट छ, बाम गठबन्दनले कांग्रेसलाई मिल्न बाध्य बनायो, लमजुंगका तिनवटै सिट कांग्रेसले जित्छ ।
← देशलाई विकास गर्न र जनतालाई समृद्ध बनाउन कांग्रेसलाई मत दिन आग्रह
समृद्धिका लागि पनि कांग्रेसकै जीत जरुरी →